इङ्ल्यान्ड भर्सेस कोलम्बियाः अाज गोल्डेन बुटका दाबेदार ह्यारी केनको अग्नी परीक्षा ! - Everest Dainik - News from Nepal
इङ्ल्यान्ड भर्सेस कोलम्बियाः अाज गोल्डेन बुटका दाबेदार ह्यारी केनको अग्नी परीक्षा !
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज प्री क्वाटरफाइनलको अन्तिम खेल इङ्ल्यान्ड र कोलम्बियाबीच हुँदैछ । इंग्ल्यान्ड १९६६ को विश्व विजेता हो । उसले जारी विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ ।
ह्यारी केन, जिसे लिङ्गार्ड तथा डेली अलीजस्ता खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा इङ्ल्यान्डले पहिलो दुई खेलमा सहज नतिजा निकालेको थियो। तर, इङ्ल्यान्डको युवा टोलीको वास्तविक परीक्षण हुने बेल्जियमविरुद्धको खेलमा दुवै टोलीले दोस्रो रोजाइका खेलाडी उतारे। जसले दुवै टोलीका प्रशिक्षकको आलोचना भइरहेको छ। नकआउट चरणमा इङ्ल्यान्डको इतिहास बिर्सनलायक छ।
इङ्ल्यान्डमा अनुभवी खेलाडीको कमी भए पनि टोलीमा प्रतिभावान् खेलाडीको कमी छैन। समूहचरणमा पाएको सफलताले पनि उनीहरूको मनोबल बढाएको छ। कप्तान केनले ५ गोल गरिसकेका छन् र उनी प्रतियोगितमा गोल्डेन बुटको दाबेदारका रूपमा उभिएका छन्।
पछिल्ला भेटमा कोलम्बियाले इङ्ल्यान्डलाई पराजित गर्न सकेको छैन। पछिल्लो पटक फ्रान्समा सम्पन्न १९९८ को विश्वकपमा पनि इङ्ल्यान्ड २-० ले विजयी भएको थियो। पहिलो खेलमा जापानसँग २-१ ले पराजित भएको जोसे पेकरम्यानको कोलम्बियाले दोस्रो खेलमा पोल्यान्डलाई ३-० तथा अन्तिम खेलमा अफ्रिकी टोली सेनेगललाई १-० ले हराउँदै समूह ‘एच’ को शीर्ष स्थानमा रहेर अन्तिम १६ को यात्रा तय गरेको हो।
कोलम्बियाको आक्रमण पंक्तिमा राडामेल फाल्काओ र हामेस रोडरिग्वेजजस्ता खेलाडी छन्। तर, चोटका कारण २०१४ को विश्वकपमा गोल्डेन बुट जितेका रोडरिग्वेज इङ्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा उपलब्ध हुनेमा शंका छ।
ब्राजिलमा सम्पन्न २०१४ को विश्वकपमा क्वार्टरफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको कोलम्बिया त्यही नतिजालाई दोहोर्याउँदै लगातार दोस्रो पटक अन्तिम ८ मा पुग्ने लक्ष्यमा छ। लगातार चार खेल जितेको कोलम्बिया क्वार्टरफाइनलमा आयोजक ब्राजिलसँग २-१ ले पराजित हुँदै घर फर्किएको थियो। -एजेन्सी